Ganacsato soomaaliyeed oo la sheegay in laga masaafurinayo Turkiga | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ganacsato soomaaliyeed oo la sheegay in laga masaafurinayo Turkiga
Booliska magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa 16-kii bishan xireen ganacsato Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo shalay oo talaada ah lasoo daayay.
Safiirka Soomaaliya ee magaalada Ankara Ambassador Jaamac Caydiid ayaa sheegay in Ganacsatada Soomaaliyeed ay dacweeyeen dadka Xaafada ay ku Ganacsanayeen, balse dadaal farabadan ay sameeyeen kusoo daayeen.
Safiirka oo la hadlay laaanta afka soomaaliga ee VOA-da ayaa uu sheegay in sababaha dadkaan loo xiray ay ahayd in ay dalkaasi ku tageen fiisooyin Dalxiis iyo kuwa Ardaynimo, isla markaana dalka Turkiga aan laga ogoleyn.
Wararka warbaahinta ay heshay ayaa waxaa ay sheegayaan in tirada Soomaalida Ganacsatada ah ee la xir xiray ay gaarayaan 9 qofood oo isugu jira 7 rag ah iyo 2 dumar ah.
Previous articleKenya iyo Ingiriiska oo soo wada saaraya shahaadada tallaalka COVID-19
Next articleMaraykanka oo ansaxinaya in ka badan 6 bilyan oo doolar oo dib u dejin loogu sameynaya qaxootiga Afghanistan